Juba Travel: Waxaan bilaga Nov iyo Disember sameynay qiimo-dhimis 10% tigidka, meel walba oo caalamka ah. - NorSom News
Juba Travel: Waxaan bilaga Nov iyo Disember sameynay qiimo-dhimis 10% tigidka, meel walba oo caalamka ah.
Shirkada Juba Travel Agency, waxey soomaalida ku dhaqan guud ahaan dalkan Norway ogeysiineysaa in cidii rabta inay tigid goosato bilaha November iyo Disember, ay shirkadu u heyso qiimo-jabin ku aadan tigadada diyaaradaha.
Adeegyada aad Juba Travel ku dooran karto ayaa waxaa kamid ah inay kuu hayaan
1) macluumaadka iyo tigidada ilaa 500 oo diyaaradood, kuwaas oo ay daqiiqado gudahood ku ogaanayaan mida ku haboon qorshaha safarkaada.
2) Inay isla markaaba kuu sheegi karaan xamuulka aad xaqaha u leedahay iyo alaabta laguu ogolyahay. Diyaaradahu wey kala duwanyihiin xamuulka loo ogolyahay inuu qofku qaato: Tusaale Ethiopian Airlines waxey u ogoshahay xamuul dhan 69 kg+10 kg, halka diyaaradaha Turkish Airlines qofka loo ogolyahay 46 kg+8 kg.
3) Inay kuu badali karaan taariikhda tigidka, bmagaca dadka ku baxayo hadii uu qaldamo iwm.
4) Inay joogaan shaqaale soomaali ah oo kuugu adeegayo luuqadaada afka hooyo ee soomaaliga, kuulana diyaar ah adeeg hufan oo sare.
Hadii aad rabto inaad sii carbuunato tigidka diyaarada ee fasaxa sommerka nagu soo aadan, waxaad la xiriirtaa Juba Travel Agencey: Kala xiriir telefoonadan:
Address-ka: Motzfelds gate 7, 0187 OSLO.
Previous articleDowlada Soomaaliya oo ansixisay heshiis ay la gashay dowlada Norway.
Next article(Xusuusin): Oslo- Kasoo qeybgal bandhiga maalgashiga guryaha ee xaafada New Gorowe.
Dadka ha sirina wayo juba waxa kaliya u muhiim ah inay lacagta dadka ka qado balse hade safraan aysan telka xata qabanenin